Xirmooyinka 94 Bokeh qaabdhismeedka bilaashka ah ee loo adeegsado Kirismaskan | Abuurista khadka tooska ah
Ma garanayno sababta, laakiin kan Saamaynta Bokeh na soo jiidata dhamaanteen. Waxay qabataa indhaheena waxayna na jiidaysaa si aan u fiirsano waxa sawirka ka muuqda. Adeegsigeedu kuma koobna oo keliya qaybta sawirrada muuqaalka ama sawirrada, laakiin sidoo kale waxay waxtar u leedahay sida gidaarka ranjiga, shaashad-sameeyaha, asalka waraaqaha ama lagu daboolayo dusha sare ee kaarka Kirismaska. Wax kastaaba waa la isticmaalaa.
Haddii aadan aqoon sida loo abuuro saameynta, waxba ma dhacaan. Taas awgeed waxaa jira casharro ama, haddii aad caajis tahay (oo aad haysato waqti kugu filan), sawirro ay bixiyeen dad kale. Qoraalkan waxaan ku ogaaneynaa 94 xirmo xirmo bokeh si aad ugu isticmaasho shaqadaada.
Saameyntan aan kuu keenayno waxaa la siiyay bogga lumay ee la qaaday si lacag la'aan loogu qaybiyo sawir qaade sawir Jill Wellington. Jill waxay ku nooshahay meel aad ugu dhow dukaanka ugu weyn Kirismaska ​​adduunka, oo dhismihiisa lagu sharraxay malaayiin nal midab leh. Jill waxay jeceshahay inay waqtigeeda ku qaadato qaadashada sawirada iyada oo leh saameynta Bokeh ee nalalkaani bixiyaan labadaba si loogu isticmaalo asal ahaan sawiradeeda. Liisanka ilahaani wuxuu u oggolaanayaa isticmaalkiisa labadaba ujeedooyin shaqsiyadeed iyo ganacsi.
Waxba kuma dhimayo inaad eegto Blog-ga Jill, labadaba si loo arko sida aad u isticmaasho lacagtan iyo inaad hel dadka kale bilaash.
Halkan ka degso xirmada
Xigasho - Lumay oo La Qaaday, Blog-ga Jill
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » Textures » 94 Naqshadaha Bokeh ee Bilaashka ah ee Loo Adeegsado Kirismaska
12 Saamaynta qoraalka wanaagsan ee Photoshop